बर्रोले बढाउँछ शुक्रकिट ? | Hamro Doctor News
बर्रोले बढाउँछ शुक्रकिट ?
महत्वपूर्ण जडीबुटीको रूपमा रहेको बर्रो त्रिफला चूर्ण बनाउन प्रयोग हुन्छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्र र बेसी क्षेत्रमा यो बढी पाइन्छ । त्रिफला चूर्णबाहेक अन्य विभिन्न समस्या हुँदा यसको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोग विशेषगरी, बर्रोका दुई भागलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बाहिरी भाग र गुदी भागलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
बिउ बाहिरको भाग :खोकी लागेमा एकपटकमा एक ग्राम मुखमा लिएर चुसिराख्नुपर्छ । खोकीको अवस्था हेरी दिनमा तीनदेखि पाँचपटकसम्म चुस्नु उपयुक्त हुन्छ । दम, खोकी र स्वर भासिएका वेला वा खसखस गरेका वेला बर्रोे चूर्ण बनाई दिनको दुईदेखि तीनपटक तीनदेखि ६ ग्रामका हिसाबले सेवन गर्दा ठीक हुन्छ ।
Last modified on 2019-03-10 01:54:31